Tadiom-pitiavana | Jiona 2006
Efa miroso ho alina ny fotoana, ny andro fahavaratra, ny orana no namaly ilay hafanana be nanenika ny renivohitr’Antananarivo nandritra ny tontolo andro.
Nifafy tao antafontrano tao ny orana izay sady nanadio no nanome aina ireo zava-boary marobe.
Indreo olon-droa mifankatia tokoa no mifampitositosy eo ambony fandriana, mifanorokoroka. Misarona lambam-pandriana manify, mifampita fitiavana, mandefa safosafo malefaka ary mitady fahafinaretana amin’ny hakanton’ny vatany. Maka fy ihany koa ny oroka mampifandray ireo olon-droa te-hikambana ho iray.
I Tahiana sy Fano ihany ireo, mamy sady miredareda ny fifankatiavany ary toa tsy ho fatin’ilay orana mikija tao ivelany.
Sady mitsiky i Tahiana no mandefa ny tanany hidina manaraka ny kibon’i Fano. Vao tafidina ambaninmbany dia tsapany ny filahian’ity olontiany fa efa mihenjana tsy nisy ohatran'izany. Niverina nifanoroka izy roa. I Fano moa tsy nahahetsika fa ny fen’i Tahiana no henony niakatra teo amboniny. Nitohy ihany ny safosafon'i Tahiana sady naveziveziny moramora. Ny tanany ilany amin’io mihazona tsara ity tehin’ny nofo hijoro tsara, sady mamehy no manafosafo am-pitiavana ihany koa.
Tampoka, nakipany ilay lambam-pandriana norakofan’izy roa teo, tiany ho hita tsara ilay firafiny. Somary lava sady vaventy mampi-te hamihina azy mafy hatrany. Niarina izy, nijery dia avy eo nandinika an’i Fano.
- "mmmmhhhh," hoy i Tahiana tamin’ny feo miangoty, "fantatrao ve ny tiako hatao?"
- "Asa ! tsy fantatro mihitsy." Hoy i Fano namaly toa mody tsy rototra.
- " Ataoko tonga io nefa tsy miditra aty amiko mihitsy."
- " Izany ve?, Fa ahoana koa ny hahaizanao izany, izaho ange tsy tia ..."
- " ssshhhuuut, hitanao eo ny fanaovako azy."
Naka fitoerana teo ankaviany i Tahiana, dia nipetraka naka aina tsara, ny tanany tsy miala amin’ny filahian’i Fano mihitsy, ny tongony ilany nalefany teny an-tratran’ity lehilahy, ny feny kosa nosokafany tsara hijeren’ity olon-tiany ny zohim-pahafinaretany. Natsotrany avokoa ny tongony roa, ny ilany ankavanana maka toerana eo ambony fandriana, ny ilany ankavia somary miforitra eny ambony tratran’i Fano izay sady manafosafo moramora koa ny ranjony. Ny tanany amin’io manotra malefaka miaka-midina miadana dia miadana, mampitombo hatrany ny hamafin’ity filahiana fenjainy eo am-pelatanany.
Ny tanan’i Fano kosa, rehefa tonga teo amin’ny foto-pe dia niakatra indray namonjy ireto nono roa toa voasary milonjehitra mampite-hioty avy hatrany. Nanaitaitra ny tsirim-pitiavany avokoa izay tsapan'ny tanany rehetra, hany ka mihamafy tahaka ny hazo ilay filahiana fenjain’ity olon-tiany.
Ny otra miaka-midina amin’io mitohy hatrany, ary vao mainka mampitombo avo roa heny ny filàny.
Avy eo dia nidina indray ny tanan’i Fano nanafosafo moramora ireo molotry ny fivavian'i Tahiana izay voaaratra madio dia madio, zara-raha misy volo. Nanomboka namoaka tsiranoka kely madio mangarangarana ny tao anatin'i Tahiana tao. Ny mason'izy roa amin'io mifampijery tsara hatrany. Nitsiky fotsiny i Tahiana, tsapany koa fa mitambolombolona amin’izay ny any anaty kibony any. Henony fa mivoitra avy eo afovoany ilay bokotra kely nifoha tamin'ny torimasony. Somary naforitr’i Tahiana ilay tongony ilany, narosony ny maojany ahafahan’ny fanondron’i Fano hikitikitika tsara ilay faritry ny fahafinaretany. Henony fa manomboka mafana ny any anatiny any.
Nakimpiny ny masony, tiany hiakatra hantrany an-dohany any ny fahafinaretana mitambolona amin’ny vatany. Ary isaky ny mihetsika kely ny fanondron’i Fano dia mampangoritsina avy hatrany ny vatany iray manontolo. Ny tanany amin’io miaka-midina mafimafy ihany amin’ity andrarezina mijoro toa vatolahy, manaraka ny onjan’izay kitikitika ataon’i Fano aminy.
- "Fano an ! tiako be … tiako be mihitsy izany ataonao izany, fa inona no ataonao amiko e!" sady somary mijery ihany izy amin’ity maso mitsirempirempin’ny fahafinaretana.
Tsy niteny i Fano fa ny fikitikitiky ny fanondrony no nataony mafimafy kokoa, injay fa tsapany manery ny filahiany mafy ny tanan’i Tahiana, ary ity farany tsy nahatazona nipetraka intsony fa dia nitsilany koa niondana tamin’ny tongotr’i Fano.
Sendra nitsipalotra kely fotsiny ny mason’i Fano no nahita ilay lava-pitia efa misokatra lonaky ny hamandoana mila hiraraka amin'ny lambam-pandriana. Ilay bokotra kely amin'io efa mivoitra be tsy hay nafenina intsony toa mampisaraka tsara ireo molotra kely mangirana mihitsy tarafin’ny jiro avy eny amin’ny valindrihana.
- "mmmhhhh," hoy i Tahiana.
Tsy tratra fa nakarin’i Fano teo amin’ilay bokotra kely amin’izay ny fanondrony, dia nokitikitihany, injay fa nanomboka nangovingovitra ny tongotr’ity fitiavany, ary tsapany mihafamy ihany ny otra ataony amin’ny filahiany. Notohizany mafimafy ihany, nosikisokiriny ilay taova bitika kely, nosintominy vetivety, injay fa nanainga valahana tampoka i Tahiana sady nisefosefo mafy, natsofony moramora avy eo ny fanondrony iray, nikorisa fotsiny noho ny hamandoana efa manenika ilay zohim-pahafinaretana. Tsapany ho maneritery ny hozatry ny fivaviana, somary nampiany tosika hiditra hatrany.
Nihamafy hatrany ny fisefosefoan'i Tahiana. Tampoka teo, nikiaka in-dray mandeha ny anao vavy dia nidaboka toa tsy nahatsiaro tena.
Nisento fotsiny izy nony avy eo. Tonga tamin’ny faratampom-pahasambarana tampoka teo ny tenany. Izy te-hahatonga ity olon-tiany indray ity no nahatonga mialoha. Tsy te-ho resy ambony ringa anefa ny anao vavy, fa notohizany ihany ny otran’ny tanany mamehy ity hozatra efa miziriziry efa manakaiky ny fahafinaretany ihany koa.
Na reraka aza ny tanany, tsy nahoany fa nataony mafimafy hatrany, nosoloiny ny tanany ilany indray, somary niarina kely izy, nifantoka tanteraka amin’ny ataony.
Hay i Fano mbola tsy nijanona fa nanohy hatrany ny safosafony amin’i Tahiana!
"pip pip pip », hoy ilay finday tany anaty poketrany tany. Nanenoneno foana, nitohy efa ho 10 segondra dia nijanona
- "noooonnnnnn!" hoy i Tahiana, aza ajanona fa aleo izay antso any ho tafiditra anaty famelan-kafatra. Tohizo foana Fano an! tsara be….., tena tiako be ny ataonao."
Tsy noraharahian’izy roa ilay antso. Navelany hitohy fotsiny teo, farany tapaka ihany, " izany hasambarana mananika ny vatako izany ve hoy i Fano havotsotso indray? sanatria an!"
Nanovokovoka hatrany i Tahiana hampiseho ny fahaizany, miaka-midina, manafosafo, miezaka ny hanamando ilay filahiana efa miridiridy.
Niverina naneno indray ilay kiririokan’ny finday fa tsy nahoan’izy ireo akory.
Farany, nihinjitsindritra aok’izany i Fano, nisefosefo ihany koa, ny fony nidobodoboka mafy, tampotampoka teo, nifatsitsitra tahaka ny ronono terena ny ranon’aina avy any anatiny tany. Niemponempona aok’izany izy namoaka azy iray manontolo. Ny tanan’i Fano amin’io toa mangovingovitra mikitikitika ny zohim-pahafinaretan’i Tahiana, namelona indray ilay ojam-pahasambarana vaovao nampikoriana rian’aratra hafa indray tany anaty kibony tany.
Vao nahita ilay rano fotsy nifatsitsiatra i Tahiana dia tafatorombina teo amin’ny lanton-tanan’i Fano. Tsy tanany fa dia nanenika azy fanindroany indray ny hasambarana.
Vizaka izy ireo, torovana tanteraka. Tsy tsaroan’izy ireo akory ilay antso teo, niakatra moramora i Tahiana namonjy an’i Fano, nifanoroka sady naka ilay lamba kely namafa izay tsirin’aina niparitaka teo ambony fandriana.
Naka aina aloha izy roa, nifampitositosy indray mba haka torimaso taorian’ny onjam-pahafinaretana tena nanefika ny vatany iray manontolo.
Niverina naneno indray anefa ilay findain’i Fano.
- "sssshhhh ! iza loatra ary izany!" hoy izy somary sorena sady nandray ilay akanjo niavian’ny feo. Nojereny ny laharana toa laharana tsy mahazatra azy.
- "Ento aty raisiko," hoy i Tahiana sady nosintominy teny amin’i Fano ilay finday.
- "Allo!" hoy ihany izy tamin’ny feo mikarantsana, vizan’ny fahafinarentan'ny nofo.
- "Allo! Oay, azafady fa nihevitra aho fa lehilahy no hiresaka amiko, mety diso laharana aho fa azafady indrindra!" hoy ilay feom-behivavy tao anaty finday.
- "fa ahoana, iza no tadiavinao?, gagagaga i Tahiana fa toa feon’olona fantany ilay miantso!"
- ""Saika hitady an’i M.Fano tompoko, ity mantsy no laharana mba tato!"
- "Allo ! Fa iza izao?," hoy i Fano nandray ilay finday.
- "M. Fano, azafady tompoko raha tsy mahadiso, ianao ve mahalala olona atao hoe: HERY, tovolahy tokony ho 29 taona?"
- "Fa ahoana, i Hery, rahalahin-drainy aho, fa misy inona?"
- "Hay ianao izany ilay dadafarany, ary raha azoko tsara koa dia i Dr Tahiana ilay nandray ny antso teo?"
- "Fa ahoana koa no ahafantaranao izany, fa iza ianao e?"
- "Havan’i Dr. Tahiana aho ka, fa azonao omena ahy ve izy fa misy resaka tiako hatao aminy, azafady indrindra M. Fano."
- "... tsy azoko mihitsy izany, fa misy inona e?, sady natolony an’i Tahiana ilay finday.
- "Allo ! fa iza izao e?"
- "I Mihary ry Tahiana an!"
- "Mihary, fa ahoana koa no nahazoan-dry ny laharan’ny findain’i Fano?"
- "tantara lava be izany fa efa niezaka niantso an-dry aho efa in-droa izay fa tafiditra anaty hafatra foana…. Tahiana an! toneo tsara ny fo dia aza taitra tampoka…..mila mankaty amin’ny hopitaly fiasàko ianareo roa maika dia maika."
- "Fa misy inona?" hoy ity iray !
- "Mikasika an’i Hery, i Hery…" hoy i Mihary sady nifokofoko ihany izy tao anaty finday,………… tongava fotsiny aty ianareo fa tsy vitako holazaina an-telefaona e !" sady notapahiny ny antso.
- "Fa misy inona indray ary, fa inona indray no nanjo an’i Hery ry Fano?" Asain’ilay zana-drahavaviko mankany amin’ny hopitaly isika izao dia izao! Mikasika an’i Hery hono."
Nikoropaka tampoka i Tahiana niala ny fandriana, i Fano etsy mbola vizana, toa tsy noraharahiany akory ilay resak’ity olon-tiany fa gagagaga tamin’ilay hoe: zana-drahavaviny mahafantatra ny laharan’ny findainy. Raha tsy niverina teo aminy i Tahiana nisarika azy handeha tsy niarina izy.
- "Tahiana an ! mbola vao ny fanombohana ange ilay teo e ! Dia faranana sahady ve?"
- "Andray ry Fano, ka efa hoe i Hery ange any amin’ny hopitaly e ! izay no hafatr’i Mihary, ilay zana-drahavaviko dokotera, afarany isika handeha ho any maika faran’izay azo atao."
Toa tsy rototra akory ity Fano , nefa avy hatrany dia natositosik’i Tahiana hatrany anaty efitra fandroana.
Afaka 15mn vao nivoaka ny trano, novelomina ny fiara dia nankany amin’ny hopitaly.
Ny orana mbola nikija be tao antokontany tamin'io. Tsy afaka nandeha mafy izy roa. I Tahiana etsy toa manahy be ihany, te-hiantso mafy an’i Mihary fa tsy sahy.
Vao tonga tao amin’ny hopitaly dia natoron’ilay mpiandry vavahady ny misy an’i Mihary. Akory ny hatairany raha nahita an’i Mihary nitanondrika teo ambony biraony. Sady mifokofoko mila hitomany raha vao nahita azy roa ...
# Posted by tadiompitiavana :: FIZARANA 6:: Hametraka hevitra (4) :: Rohy maharitra :: Verindrohy (trackback) (0)
Nanaraka moramora avy ao aoriana ilay mpamily, izy amin’io tsy tena mifantoka tsara fa toa varimbariana nanara-dia ilay fiara karetsaka teo alohany fotsiny. Tampoka teo, tsy hitany akory fa nisy fiarabe mpitatitra olona nirimorimo mafy avy any ankavanany toa nanezaka mafy ny hijanona amin’izato figikan’ny kodiarana nefa mbola tsy tafajanona ihany raha tsy efa nidona mafy tamin’ilay varavarana manakaiky ny nisy an’i Hery. Avy hatrany dia nipitika teny amin’ny dimy metatra ilay fiara karetsaka, ary i Hery no voadona mafy tamin’ny fiforetan’ilay varavarana.
Nisy olona naratra koa tao anatin’ilay fiarabe fa nidona tamin’ny fitaratra teo alohany. Taitra sady nikoropaka avokoa ny mpandalo rehetra.
Nitangorona ny olona, tao ny nisomaritaka fa saika voadona, tao koa ny avy hatrany dia namonjy ny tao anaty fiara, navoaka ilay mpamily, tsy dia naninona loatra ilay rangahy fa i Hery sady naratra mafy no voadona koa ny lohany, toa tsy mahatsiaro tena…
Ilay fiarakaretsaka iray nitondra an’i Mihary kosa vao lasa lavidavitra ka nahare ilay lozam-pifamoivozana dia nijanona:
- "Azafady ramose mba ajanony kely hoe fa toa nisy loza nitranga io ao aoriantsika io. Mpitsabo mantsy aho ka tsy mandry ny saiko raha handao fotsiny ny zavatra toa izao. Aza mandeha anefa ianao fa andraso aho an."
Avy hatrany dia nivoka ny fiara i Mihary, ny andro rahateo efa maizimaizina fa efa madiva ho alina.
Vao tonga teo amin’ny toerana nitrangan’ny loza izy, ny olona, mamoaka ity naratra mafy, tsy voavoha mihitsy ilay varavarana voadona fa avy aty amin’ny ilany no nosintonina ity tovolahy tsy mahatsiaro tena. Nihamaro hatrany ny olona nitangorongorona teo.
- "azafady, azafady," hoy i Mihary etsy, misisisisika sady manavatsava anatin’ireto olona marobe nifamahofaho sy nihazakazaka nijery.
- "azafady tompoko ô ! azafady fa dokotera aho hijery izay mitranga e ! azafady indrindra!"
Nomen’ny olona làlana izy, nijery ity lehilahy efa vonton-dra amin’ny tarehiny.
Tsy mbola azony an-tsaina na iza na iza, ny andro koa mihamaizina, ny olona nifanetinety ihany.
- "Azafady ry ise an ! raha azonao atao, dia aza avela hifanototra eto ireo olona marobe ireo, fa mila rivotra isika."
- "Raha misy olona afaka miantso fiara-mpamonjy voina rey olona dia mba antsoy azafady e!" hoy i Mihary niangavy ihany.
- "Angony daholo izay vatam-panafody vonjy taitra anatin’ireo fiara ireo, aingàna ianareo izay mahita izany e!"
Vetivety teo dia nipoitra avy any ny fitaovana nangatahiny, novahana ny vovon-dandihazo, nofafàna izay ra tamin’ny tarehin’ny maratra. I Hery amin’io mbola tsy mahatsiaro tena ihany, notsapaina ny fony mbola mitempo fa malefaka, izy zara raha miaina.
Injany fa re manakoako avy any ny anjomaran’ny mpitondra marary satria tsy lavitra avy teo ny toby misy azy, mitarataratra ny jiro manga, manavatsava ireo fiara mitohana noho ity lozam-pifamoivozana.
Vao tonga teo amin’ny toerana dia nobataina i Hery, nakarina teo ambony fandriana kely, nampidirina tao anaty fiara nony avy eo.
I Mihary moa tamin'io tsy maintsy mbola nijery ilay maratra hafa sy ireo mpamily. Nifampiresaka tamin’ilay mpamonjy voina izy nony avy eo ny amin’ny hitondrana ireo maratra hafa!
Alohan’ny hiaingàna dia niakatra tao anatin’ilay fiara i Mihary ary akory ny hatairany, tsy azony an-tsaina mihitsy hatramin’izay, fa i Hery anie ity maratra mafy manoloana azy. Taitra tsy mbola nisy ohatran'izany izy! tsy hitany anefa izay ho tenenina fa ny fony no tsapany nidobodoboka mafy. "Loza ity," hoy izy tany antsainy tany nony avy eo.
- "Tsy maintsy manaraka anareo aho izao fa olom-pantatro io maratra io!" hoy izy tamin'ireo mpamonjy voina. Soa fa lehibe ihany ilay fiara ka afaka nitondra izay tena naratra aloha. Niazakazaka i Mihary namonjy ilay fiara karetsaka niandry azy dia nanazava ny zava-misy tamin'ilay mpamily teo sady nandoa ny volany dia niverina haingana namonjy ilay fiara hitondra an'i Hery tany amin'ny hopitaly.
Natahotra mafy i Mihary teny an-dalana. Nohenoiny matetika ny fitempon’ny fon'i Hery izay tsapany fa toa malefaka dia malefaka. Nisento izy nijery ity olon-tiany rakofan'ny saron-tava mba hifohany rivotra madio iainany. Tsy mbola mahatsiaro tena hatrany i Hery. Ilay mpitsabo mpanampy mpamonjy voina moa mandritra izay fotoana izay tsy nitsahatra nanadio ny ratra amin’ireo marary hafa.
Vao tonga tao amin’ny hopitaly dia nikoropaka ny rehetra ary efa vonona ny handray azy ireo avokoa ny mpitsabo, mahafantatra an’i Mihary avokoa izy ireo satria hopitaly iasan’i Mihary koa ny nitondrana ireo maratra ireo.
- "Tsy maintsy miakatra any amin’ny efitra fandidiana izao dia izao, mila fitarafana izy ity hoy i Mihary fa mety misy tapaka any amin’ny tongony any,"
Nirodorodo ny rehetra. Ny maratra hafa moa navelan'ny Mihary nosahanin'ny mpitsabo hafa fa dia noraisiny antanana mihitsy ny momba an'i Hery.
Vao tonga tao amin’ny efitra fandidiana, napetaka avokoa ny fitsapàna rehetra, napetrak’i Mihary tamin’ny mpitsabo namany aloha ny marary fa naka ny akanjo sy nanao ny fanadiovana ny tenany izy.
Fotoana vetivety ihany dia iny i Mihary niditra ny efitra, injany ny feon’ny milina mipipika manambara ny fitempon’ny fon’i Hery, malefaka dia malefaka. Miha-miadana hatrany.
- "Mila mitandrina isika, miha-miadana hatrany ny fitempon’ny fony izany."
- "Ahoana ny valin’ny fitarafana?"
- "Misy tapaka ny taolam-peny dokotera!"
- "Ary ny tratra sy ny ratsam-batana hafa?"
- "Tsy maninona ka! azo tsapaina tsara!"
Notsindritsindrian’i Mihary aloha ny tratran’i Hery, ilay feon’ny milina niha-niadana hatrany. Nanomboka manganohano ny mason'i Mihary.
<<piiip, …piiiiiiip,…. piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>>>>
Tsy nitempo intsony ny fon’i Hery, nikoropaka ny rehetra, nisamahotaka ny eran’ny trano, i Mihary etsy ila ho latsa-dranomaso toa tsy nahita hotenenina. Loza ity, loza marina.
- "Tsy tanantsika intsony, tsy tanantsika intsony, aingàna ianareo, .... "
# Posted by tadiompitiavana :: FIZARANA 6:: Hametraka hevitra (1) :: Rohy maharitra :: Verindrohy (trackback) (0)
- "Fantatro ry Mihary fa tsy tokony hanao ity zavatra ity aho, fa na dia ny fiarahantsika hatramin’izay aza dia aleoko manolotra anao ity fanomezana kely ity, mba ho fiarahabana tratry ny Krismasy sy ny taom-baovao e !," hoy i Hery sady nanolotra fonosana miendrika efa-joro mangirana tadiana kely izay izy ;
- "Oh ! misaotra betsaka, tena misaotra ry Hery, hay ve izay no nahatonga anao hitady ahy androany e!"
- "Ie ! eny e ! tsy izay ihany akory fa mba te-hiresaka koa aho, fa mila namana iresahana."
- "Tsy maninona raha vohaiko izao an!"
- "Tsy maninona ka ! enga anie ka ho tianao!"
- "Andray ry Hery, fa inona ity fanomezana atolotrao ahy, zavatra lafo vidy be!"
Nitsangana mihitsy i Mihary sady nanatona an’i Hery rehefa nivaha ilay fonosana. Rojo volamena manifinify izay no tao anatiny. Faly aok’izany izy. Nanatona dia nanoroka ny takolak’i Hery.
- "Andray, fa maninona ary aho no toloranao zava-tsarobidy toy izao!" sady niantsalorany ilay firavaka, i Hery tsy niteny.
- "Ianao no nanokatra ny masoko, dia tiako mba omena an’iny. Aleoko manao fandaniana be hahatsiarovako tsara izay nataoko. Sady izao fitsaboana ataonao ahy izao, fitsaboana moa no ilazako azy, dia tsy ho voavidim-bola mihitsy ry Mihary fa dia raiso fa natoako amin’ny fo tokoa."
- "Misaotra ary, dia misaotra betsaka, …. fa toa tsy manana fo faly izany mihitsy ho’aho ianao e!"
- "Jereo tsara ary ny masoko dia aleo mifampiresaka isika."
- "Ssshhh, ny mampalahelo ahy dia i Alexia tsy namaly ahy mihitsy hatramin’izao, nefa efa nalefako mailaka aminy ny laharan’ny findaiko. Mino aho fa i Tahiana dia mahalala tsara ny misy an-dry zareo fa tsy te-hiteny amiko, azonao atao ve ry Mihary ny mandresy lahatra azy, hanomezany vaovao? Ny atahorako mantsy, isaky ny mifankahita izahay, dia mety hisarika ahy hanao ny tsy tokony hatao foana izy. Moa tsy tiany mihitsy ny handehanako any an-dafy, nefa izaho efa nanao famandrihana tamina ivon-toerana fizahan-tany mba hahamoramora kokoa ny ahazoako ny visa."
- "Fa inona no saika nataony taminao?"
- "Mitady hoe hanao firaisana amiko foana izy!"
- "Hatramin’izao ve?"
- "Tamin’izaho ilay avy tonga tany Mahajanga iny."
- "Ka efa niova ny fandehan-javatra fa mety tsy mahalala ianao, izy ange ka efa miaraka amin’ny dadafaranao e!"
- "izay tokoa angaha fa ny adiresin’i Alexia no tiako ho fantatra aminy na dia laharana an-tarobia fotsiny aza!"
- "Eny e ! azonao atokisana aho fa mila mahandry tsara fotsiny ianao. Sady… ssshhh….eny e!"
Toa tsy nahoan’i Mihary akory ilay resak’i Hery, tsy niditra ny sainy akory aza, fa ity fanomezana ity no nampirehitra indray ny fitiavany toa tsy hainy nosakanana. Nitsangana izy dia niodina tao ambadik’i Hery.
- "Aleo aloha ianao oriko eto amin’ny soroka fa tena vizan-tsaina mihitsy. Mety izao!"
- "Ie ! mety tsara," hoy koa ity iray, naka fy ny otra nataon’i Mihary.
Afaka telo minitra, dia najanony, sady nijoro teo anoloan’i Hery izy sady nampitraka ny lohany.
- "Raha fantatrao mantsy ry Hery ny halalin’ny fitiavako anao!…"
Toa tsy nahoan’i Hery izay teny izay fa lasa lavitra tany amin’i Alexia ny sainy. Safosafo malemy no tsapany tamin’ny takolany, dia injay nisy hafanana mitohoka amin’ny molony sady nifanoroka taminy.
Navelany ity vehivavy hipetraka teo ambony lohaliny sady nofeheziny koa. Dia lasa ny safosafo, ny oroka tsy nijanona.
Ny mason’i hery amin’io mikimpy mameno ny endrika soan’i Alexia ao an-tsainy. I Mihary kosa naka fy nanome fisaorana ity fanomezana noheveriny fa tamin’ny fitiavana tokoa.
Rehefa lasa lavitra ny orokoroka, dia nifampikasoka ny lela ary teo vao tsaroan’i Hery ity hamamin’ny fitiavany ilay olon-tiany, nosokafany ny masony, toa diso fanantenana fa vehivavy manao akanjo fotsy fitondran’ny mpitsabo no hitany. Ny tanany efa mamaha tsikelikely ny bokotry ny lobany.
Tampoka, niala i Hery ;
- "Mihary an ! tena miala tsiny, fa …"
- "Hery an ! fantatrao tsara ny halalin’ny fitiavako anao," sady nofeheziny ny lohany hifanoroka taminy indray.
- "Tsia an ! tsia dia tsia, ry Mihary, efa nifampiresaka momba izay isika. Fa tena tsy inoanareo mihitsy ve izany ny fitiavako an’i Alexia no sedrainareo izay sarotra amiko aho?"
Nisento fotsiny i Mihary, tsy nahateny, dia avy eo natsangan’i Hery.
Iny izy niverina nipetraka teo ambony sezany, dia niondrika tsy te-hampiseho ny masony manganohano.
- "Tsy haiko," hoy i Mihary nanomboka latsa-dranomaso, tsy tsapanao tokoa ve fa ny nataontsika tany Mahajanga dia nanamarika zavatra lehibe tamin’ny fiainako? "
- "Azoko dia azoko Mihary an ! fa efa nilaza taminao aho fa efa niova sady efa nifanaiky isika."
Nanatona azy i Hery nefa natosiny tamin’ny tanany , izy nanomboka nitomany no namaha ilay rojo dia natolony an’i Hery.
- "Ento any ity ry Hery an ! tsy anjarako ity, tadidio fa tsy fanao ny manome volamena, na rojo io, indrindra moa fa peratra ho an’ny namana fa midika zavatra hafa izany.
Dia andàna mandeha…" hoy ihany i Mihary nifokofoko, "tadiavo ny Alexia anao fa izy no sahaza ireny."
Tsy nety nandray i Hery, latsaka tamin’ny gorodona ilay rojo, dia noraofin’i Mihary ihany sady natsofony tao anaty paosin’i Hery.
- "Tena miangavy mafy anao aho ry Hery an ! Andàna mandeha.
Efa hendry rahateo moa ianao ka vita ny adidiko! Vita koa izay iraka nampanaovina ahy!"
Tsy azon’i Hery izany teny izany, fa niala teo izy dia nanokatra ny varavarana, soa fa tsy nisy marary hozahana intsony dia nidina ny tohatra izy, niandriandry teo ivelany mba hanarahany maso tsara an’i Mihary sao dia hamerina indray ity nataony tany Mahajanga.
Afaka 15 minitra dia iny i Mihary nivoaka ny trano fiasàny, nisakana fiarakaretsaka sady toa tsy nanontany akory fa niditra dia lasa.
Tsy nisalasala i Hery naka fiarakaretsaka hafa koa dia niteny hoe :
- "azonao arahina ve iny « taxi » iray iny fa aloako ny hofan’ny fiaranao?
Nanaiky koa ilay mpamily dia nifanaraka teny ny fiara roa.
# Posted by tadiompitiavana :: FIZARANA 6:: Hametraka hevitra (0) :: Rohy maharitra :: Verindrohy (trackback) (0)
Efa madiva ho maizina ny andro vao tafaverina i Alexia sy Tojo. Maivamaivana tokoa i Alexia nony tonga tao an-trano. Ampy nandinihiny ny mikasika izay mety ho aviny ny tolakandro nolaniany teo. Faly izy e! faly. Adinony avokoa ny zava-nanahirana azy rehetra teo. Asa, izao tokoa ve ilay hoe ao anatin'ny mangidy no misy ny mamy? Sa ny mamy mihitsy no tsy mipoitra raha tsy avy misedra ny mangidy? Niverina indray ilay hatsara-pon'i Alexia hatrizay. Ny manodidina azy maizina tanteraka taminy teo iny toa nanjary rakotra hazavana mitsilo ny ho aviny. Miramirana ny endriny, mailamailaka ny fihetsiny, nampita tara-pankasitrahana izay nanodidina azy ny fitsikiny. Adinony fa mbola tohana mafy tamin'i Malala izy vao ora vitsivitsy lasa izay. Toa nanolatra sahady koa angamba ireo fery nateraky ny tantaran'ny setrasetram-pitiavan'i Hery. Nivimbina fehitenda mitsoriadriaka manga tanora izay izy nokasainy hatao fanomezana ho an'i Mahefa, ary fehezam-boninkazo maro loko ho an'i Malala. Saingy indrisy, tsy tao an-trano intsony ny rainy.
Vao tsinjon'i Malala ho navitribitrim-pamindra sy velombelon-tsiky i Alexia dia mba niezaka ihany izy nanafina ny adi-tsainy. Im-polo tokoa mantsy raha kely indrindra ny nanandramany niantso an-tarobia an'i Hery. Ny laharan'ny any am-piasana raha teo tsy nananany.
- "Bonsoir Neny, ngaha i Profesora efa lasa? ity voninkazo ho an'i Neny ho mariky ny tena hafaliako sy ny fankasitrahako an' i Neny. Fofony anie e! Manitra a! Sady namonjy nipetraka teo ankavananan-dreniny teo ambony sezalava fijerena fahitalavitra izy, nasampiny ny sorony ny tanany havanana, dia natohony moramora ny andriny ny molony."
- "Ary aiza i Tojo? "
- "Nanatitra ahy fotsiny izy dia lasa koa"
Nitsiky Malala, noraisiny ilay fehezam-boninkazo sady nahankiny tamin-tsandrin-janany ny lohany.
- "Misaotra izany zanako izany. Tsara fo sy saina loatra raha ianao Alexia a! Miondrika manoloana ny fahendrenao aho." Nanomboka nanganohano ny masony. Indraindray aho mieritreritra fa tsy mendrika ny ho reninao anaka. Toa Reny iray vaovao no sahaza ho anao fa tsy Ray vaovao, satria Ratrema dia nahafeno mandrakariva ny toetra vanona maha-Ray azy. Na dia niezaka ny hanafina aza i Malala dia tsinjon'i Alexia ihany ny fipatrapatrakin'ny ranomason'ity reniny.
- "Neny a! Aza manao izany ianao. Ianao no reniko, tsy manana reny hafa ankoatra anao aho, ary tsy mitady na haniry ny hanana reny vaovao. Tsapako ny fitiavanao ahy, aza manana eritreritra hafa ankoatr'izay ianao. Tsy hary aho raha tsy ianao sy Papa, ary raha mahita toetra tsara aty amiko ianao dia saino fa ianareo no nikolokolo ahy nandritra izay 22 taona niainako izay. Fotoana fanovozana ny tena maha-olona ifehezana ny fahatanorana, ary ireharehana amin'ny fahanterana. Afaka miantso an'i Papa amin'ny findainao tokoa ve aho, manina azy aho izany. Efa mahafantatra koa izany izy ry Neny hoe Profesora Mahefa no raiko?"
- "Eny anaka efa fantany!"
- "Ary ianareo an! Tena mba gisitra indray aho izany tamin'iny koa. Nefa vaovao tsara lafatra be iny Tsss. Iza izany sisa no tsy mahalala? Toky sy Cynthia? Hoy i Alexia nananihany."
- "Ka ianao anie teo tsy salama e! Dia nifanaraka izahy telo mianadahy fa hoe rehefa sitrana tsara ianao vao ampahafantarina ny marina. I Hery izao no tsy mahalala."
- "An ! Hery! hein! Mihevitra ve i Neny fa ho liana amin'izany? Tsss"
- "Andray, raha izay ranomasony teny Ivato izay anie ry Alexia, hein, tsy mino ianao hoe i Hery matanja-be iny no nidradradradra nitomany tery imasom-bahoaka. Andramo antsoy ihany hoe izy, dia lazao azy e!"
Zava-baovao tamin'ny sofin'i Alexia indray iny hoe i Hery nidradradradra teny an-tseranam-piaramanidina iny. Marina ve izany? hoy izy tany an-tsainy tany. Resy lahatra ve izy ny amin'ny tokony ampahafantarana an'i Hery ny marina? Sa dia mba te hampiseho andreniny fotsiny fa hoe manaraka ny toroheviny, sa tsy tiana ho tsikaritry Malala fa nihitatra anie ny olana amin'izy sy Hery, na koa mba te haheno ny feon'i Hery tsotra izao izy. Tsy fantatra aloha izay marina fa dia noraisiny ny findain'i Malala. Gaga izy raha nandre ilay famantarana fa tsy miasa intsony ny laharana. Namporisika anefa i Malala sao mba misy naman'izy ambamin-dry Hery azo antsoina, na koa raha tadidin'i Alexia ny laharan'ny any am-piasany. Na dia namporisika fatratra aza i Malala dia nanda i Alexia. Toa natahotra izy sao dia ho fambara hafahafa indray izao tranga miseho izao. Matahotra izy sao dia haheno zavatra hafahafa mikasika an'ilay olon-tsy foiny indray. Naleony ninia tsy niezaka ny ahafantatra izay momba azy.
- "Ary ny mailaka?" hoy i Malala niezaka hatrany handroso soso-kevitra, angah ianareo tsy mba mifanoratra amin'ny mailaka? Sao mba nandefa vaovao momba azy any izy?"
- "an an! mino aho fa efa maty izay ny adiresy mailaka-ko."
Sady niodina i Alexia ho any amin'ny trano fidiovana, toa tsy te hanohy ny resaka intsony. Niserana kely indray ilay aloka nanamaizina ny lanitry ny fiainany. Teo ambony bakoly fotsy fivalanan-drano izy no nitanondrika latsa-dranomaso indray. Nino izy fa efa tsy maintsy namaly ilay mailakany farany iny izay i Hery. Saingy... tsy tiany ho fantatra izay mety ho tohin'ny ao. Nanomboka iny andro mangidy iny dia toa zary nihozona anaty mihitsy izy tsy hanokatra ny aterineto intsony. Tahotra no nibahana tao anatiny. Tsapany fa marefo izy, ary ilay olona nantenainy ho andry matanjaka, azo iankinana rahatrizay no indray inty ninia namela takaitra ho azy. Tsy maintsy nahodiny any amin'ity rainy vaovao ny sainy mba hampitony azy indray. Iantso azy mba hifanao fotoana rahampitso na dia hiara-hisotro kafe fotsiny aza.
Ontsa dia ontsa ny fon’i Tojo mahita ny fipenipenin’i Profesora Mahefa amin’ny fikarakarana azy mianaka vehivavy. Toa ilay profesora mahay nikoizan’ny rehetra ity, na amin’ny fitsaboana na amin’ny torohevitra, no toa kivy sy mitady ho very hevitra ny amin’izay tokony atao manoloana ny olany. Hatramin’izay nahafantaran’i Tojo azy izay tokoa mantsy dia toa tsy mba noseranan-tsampona izany ny fiainan’i Profesora. Lehilahy nahavita be taminy raha i Profesora Mahefa, namonjy azy na tamin’ny lafiny ara-bola na tamin’ny lafiny ara-tsaina, indrindra indrindra moa fa ara-pahasalamana. Izy no mba hany solon-dray aman-dreniny nandritra izay dimy taona naha-taty Frantsa azy izay, ary toy ny zanaka nateraka ihany koa no nitondràn’i Profesora azy hatramin’izay. Ankehitriny hitany ho tena tojo olana i Profesora. Mba te hanampy azy koa araka izay azony hatao izy nefa amin’ny fomba ahoana? Tsy afaka ny hananatra na koa hoe hanome torohevitra, ny tenany koa mantsy mbola zaza loatra raha mihoatra amin’i Profesora. Nohararaotiny ihany anefa ny fotoana sendra nahatafahaona tao andakozia azy mianaka:
- "Profesora a! raha misy azoko anampiana anao dia aza misalasala miantso ahy, na andro mangirandratsy io na alina mamirifiry. Fahafinaretana lehibe ho ahy ny ahafahako manampy anao, ary matokia ahy fa am-pitiavana no hanaovako izany."
- "Eny r’ise Tojo, misaotra indrindra an’ise aho noho izany tenin’ise izany. Fantatro fa olona azo itokisana raha ise, ary tena natoky an’ise foana aho hatramin’izay. Ny tena olako izao dia ny fanahiako ny amin’izay mety ho tohin’izao fandehan-javatra rehetra izao. Ny amin’i Malala moa dia tsy azoko mihitsy hoe inona no tena manjo azy, inona no nahasafotra azy tampoka teo, tena mbola mila fanadihadiana lalina ny amin’iny fa tena misy zavatra tsy mazava amiko. Fa ny amin’i Alexia r’ise no tena mahavaky ny saiko a! Ohatran’ny matahotra aho ny amin’izay mety ho fiovan’ny fihetsiky i Alexia amiko aorian’izao fotoana izao. Tsy vitako akory ny nanadihady izay tena mahazo azy marina tokoa."
- "Aza manahy ianao Profesora a! omeo fotoana izy aloha ahafahany mandinika tsara izay ho ataony. Marina fa tampoka taminy ny nahenony ny tena marina, kanefa na rahampitso na afaka am-bolana dia tsy maintsy ho tampoka ho azy foana no handraisany azy. Araky ny fitantaran’i Madama ahy mantsy dia tena olona tsotra sy be fandeferana raha io tovovavy io, koa mino aho fa ho fantany izay tokony ataony. Manakory raha entoko mivoaka kely izy mianaka Profesora? Sao dia izay no tokony ataoko?"
Tsy nahateny i Mahefa. Tsy fanontaniana nipetraka na fanazavana natao, nefa dia toa arak’i Tojo ny fandehan-javatra rehetra. Tamin’ny fomba ahoana? Tsy maintsy Malala izay. Nanaovan’i Mahefa fijery miorirana i Tojo.
- "Aza manahy ianao Profesora a! Mba entoko haka rivotra kely fotsiny e! Ao anaty fiara ihany fa tsy mivoaka akory sao sanatria hisy fiantraikany amin’ny fahasalaman’i Alexia. Raha manaiky moa izy ireo mazava ho azy."
- "Eny e! eny e! Tena hevitra mety tokoa ny an’ise ka! Tsy misy sakana avy aty amiko mihitsy. Saingy i Alexia ihany entina, hahatsara azy izay hevitr’ise izay. Ilazao ary izy e! I Malala... mbola misy resala kely ifanaovako aminy."
Nanaiky izy, nefa azo lazaina ho nanaiky tsy sazoka ihany satria, raha ny tena faniriany dia i Malala no nentina, i Malala ihany, saingy ny hanampy an’i Mahefa no tanjony, dia izy mianaka no nolazainy, kinanjo … niafara tamin’i Alexia irery. Ity farany koa nanaiky avy hatrany, tsy nisy fihambahambana, toa zarany tokoa hivoaka kely, hihataka kely amin’izao fisafotofotoan-javatra izao. Tsy hitan’i Alexia marina izay hasiany ny tenany sy izay haloaky ny vavany. Toa saron’ny henatra ny hafaliany. Nefa lalina tany anatiny tany dia nisaotra an’Andriamanitra izy fa nivaly sahady ny vavaka nataony, tojo amin’ny niriany izy ity, ny ahafantarany ny ray niteraka azy. Ny fisaorana feno an’i Tojo no nalefany aloha indrindra noho ny fandavantena nananan’ity farany. Zay izy vao nilaza fa mbola hiakanjo aloha, fialantsiny koa nataony noho izany raha tsy maintsy mbola mampiandry kely. “Tsy maninona mihintsy ka, ataovy miadana” hoy i Tojo sady nitsiky.
- "Tojo, izay fa vonona aho, tena tsy manahirana anao a!"
Nahodin’i Tojo niankavanana misy ny varavarana nihavian’ny feo ny lohany. Tovovavy mpanao akanjo mandry hitany foana hatrizay no indro nanao fitafy mendrika nefa mampisongadina ny hatsaram-bikany. Ny volo hitany nifatotra fingotra sady somary misaritaka nandritra izay fotoana vitsy nahalalany azy izay indretsy hitany lava mipariaka manarona ny hatreo an-tsorony. Ny sanga sy ny volo mandady zary manao tana-masoandro hatrizay, indretsy milamaka tsara somary misori-bilana miankavanana. Bika re izao, endrika re izao, ravahan’ny molony feno tsiky sy ivoahan-teny malefaka. Sanganehana i Tojo, ampian’izato fahalalam-pomban’i Alexia
- "An? ...non, tss tsy maninona ho’aho, sssady, ssssady malalaka ny fotoanako androany, tsy mianatra aho."
- "Ndao isika hanainga ary e!"
- "Ka manao ahoana ianao izay ry Malala?" sady nanantona teo antongom-parafara i Mahefa
- "Efa tsara ka, toa fanina tampoka fotsiny aho teo iny."
- "Tsara izany, fa hono ho’aho ry Malala, fa ahoana ny fifandraisanao sy Tojo moa?"
- "Ahoana ahoana ry Mahefa? Faa… inona no nolazainy anao? Tsy hitako. Tsisy."
- "Toa mampanontany tena ny fihetsikao ry Malala"
- "Fantatro izy ka, fantatro, olona tsy ratsy, ianao koa aza efa niteny izany."
- "Vao afiriana no nahafantaranao azy nefa dia…"
- "Iie! Niara-niantsena izahay, nandehandeha, nisy fotoana izy mba nisakafo hariva niaraka taminay telo mianaka tato, izaho no nanasa azy mba ho fankasitrahana ny fanampiana nataony rehetra. Nisy zavatra notantarainy anao angah? Tsy mbola taitra ve ny ankizy? Aleo aho aloha hijery azy dahy kely. Sady nitsangana izy ho any an’efitra."
Na dia niezaka ny hiala aza i Malala mba tsy hihitaran’ny resaka dia indrisy, nanaraka azy avy ao aoriana i Mahefa.
- "Dia ny tsiambarantelon’olona ve no borahinao aminy na dia hoe nifandray be sahala amin’inona aza ianareo e!"
- "Tsiambaratelo inona ry Mahefa a! Tsory fotsiny raha toa tsy nankasitrahanao ny nanasako azy hisakafo hariva tato amin’ny tokantranonao. Tsory fa aza mody fanontaniana hafahafa tsy misy dikany no asesikao. Miala tsiny aho, manao azafady aminao raha toa ka somary nanjakazaka tato amin’ity trano ity. Tsapako mihitsy izao fa efa tokony hody aho hamonjy ny tokatranoko. Ela loatra no nijanonako tato aminao, ny havan-tiana tokoa angamba tsy tokony hiaraha-monina ka. Sady efa salama izao i Alexia, efa vaky koa izao fa ianao no rainy, ianareo mianaka ve tsy hifampizaka eo. Tsy misy antony intsony tokony ijanonako aty. Sao anjary ho enta-mavesatra ho anareo izahay telo mianaka. Efa hody izahay e! efa hody. Miandry vola avy amin-dRatrema aho. Tsss, maninona tsy tonga dia tsorina fa…"
Gina tsy nahateny ingahy Profesora, nijaikojaiko niditra tany an’efitranony. Tsy dia reny tsara intsony izay tohiny tao. Inona ity nahazo an’ity Ramatoa ity? Izany tena hoe bokotra iray no nopotsirina dia tonga dia nanao tifitra basy marovava avy hatrany. Nitsilany teo amparafara i Mahefa, nandinika ny zava-nitranga rehetra, takany, tena takany ny zava-niseho. Tadidiny ny fisian’ilay silipo indray maraina iry. Hein! Izany no hoe gisavavy homa-ketsa, izy manao ny tsy fanao indray ity no avo vava. Iny ketsa iny kosa tao amin’ny nilàna azy tsara, sa dia efa ity Malala ity mihitsy no tsy mifidy ketsa? Sady nihomehy irery teo i Mahefa. Ny tena nahavaka ny sainy indray avy eo dia ny hoe “nahoana ary I Malala no niezaka nampiaraka an’I Tojo tamin’I Alexia nefa I Tojo efa niaraka taminy? Tena tsy mazava amiko ny toetran’ity Malala ity ka! Nefa tokony ho tsinjoko lavitra ihany ka, izy aza vao nahita ahy dia nanaiky ny niray tamiko. Ssshh, deinn! Kiriko aho, marina tsy tena sady kiriko amin’ny tenako aho izany. Tsy tiako ho sainina akory izay mety ho fomba fiainany ka! Samy manana ny fiainany tokoa ny olona. Azy any izany, izay fomba itondrany ny tenany tsy ahoako.” Sady nihivingivindoha i Mahefa no namonjy nihohoka teo am-pandriana. “Nefa … nefa izay fiainana niainany dia nahakasika an’I Alexia, I Alexia zanako, izay mahakasika an-janako tokony koa ahakasika ahy. Tsy afaka ny hialangalana aho, adidiko ny zanako. Mba ahafahako mifankahazo am-po aminy sy manampy azy tanteraka dia tsy maintsy ezahiko ny miaina izay fiainana rehetra niainany tany aloha tany. Inona no nitranga? Ny fahazazany, ny fahamatoiny, izao ny fahatanorany. Hery, Hery, inona no olana nosedrain’izy sy Hery ka nahatonga iny loza-pifamoivoizana iny? Eny e! reko hoe nisy tovovavy iray hafa… nefa na dia izany aza ve? Ary i Malala safotra teo, toa ny anaran’i Hery no naverimberiny, sa Hery hafa? Azoko antoka zato isan-jato izao fa mihodina amin’io Hery io ny safotofoton-tadiom-piainan’ity fianakaviana ity. Saingy sahala amin’ny ahoana ny fitsokany?